शरीरमा यस्ता संकेत हुने मान्छे हुन्छन् अति नै भाग्यमानी !::Leading Nepal News
शरीरमा यस्ता संकेत हुने मान्छे हुन्छन् अति नै भाग्यमानी !
एजेन्सी । समुद्रशास्त्रले हरेक प्रकारको कुरा बताइरहेको हुन्छ । ज्योतिषशास्त्रलाई मान्ने हो भने यसले शरीरमा भएको अनेक प्रकारको संकेतलाई अध्ययन गरेर व्यक्तिको बारेमा बताउने गर्दछ । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार शरीरमा भएका यी संकेतहरुले तपाईको बारेमा निम्न कुराहरु बताउँछन् ।
१.दाँतमाथि दाँत खप्टिनु: समुद्रशास्त्रका अनुसार जुन व्यक्तिको दाँतमाथि दाँत खप्टिएको हुन्छ उनीहरु भाग्यमानि हुन्छन् । यसका साथै यिनीहरुको राम्रा तथा सधैँ साथ दिने मित्रहरु हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरु आफ्नो भाग्यको साथले नै अघि बढेका हुन्छन् ।
२. ६ वटा औँला: समुद्रशास्त्र अनुसार जसको हातमा ५ वटा नभएर ६ वटा औँला हुन्छ उनीहरुको भाग्य एकदमै बलियो हुन्छ । यी व्यक्तिहरु हरेक कामलाई आफ्नो मान्छन् र धेरै नै इमान्दारीताको साथ गर्ने गर्छन् । यसका साथै यी व्यक्तिहरुले प्रसिद्धि समेत कमाउँछन् ।
३.दाँतको बीच खाली ठाउँ: दाँतको बीच ग्याप हुने व्यक्तिहरु आर्थिक क्षेत्रका निर्णय लिन धेरै नै सक्षम हुन्छन् । समुद्रशास्त्र अनुसार यस्ता व्यक्तिहरु गफाडि हुन्छन् र कुरा बनाउन कहिल्यै पनि थाक्दैनन् । यस्ता व्यक्तिहरु भाग्यशाली हुन्छन् । भनिन्छ कि जसको अगाडिको दाँतबीच खाली ठाउँ हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरु पैसा देखि लिएर करिअरसम्मको कुरामा निकै नै भाग्यशाली हुन्छन् ।
४.पुरुषको छातीमा रौँ: जुन पुरुषको छातीमा रौँ हुन्छ त्यस्ता पुरुषहरु धेरै ने शान्त र सरल स्वभावका हुन्छन् । पैसाको कुरा गर्ने हो भने यस्ता व्यक्ति धेरै नै धनी हुन्छन् र यीनीहरुलाई जीन्दगीभर कहिल्यै पनि धनको कमी हुँदैन ।